7- Cayaaryahan Oo Aan Weligood Ku Guuleysan Horyaalka Soomaaliya Ee Sannadkan Qaaday %
7- Cayaaryahan Oo Aan Weligood Ku Guuleysan Horyaalka Soomaaliya Ee Sannadkan Qaaday
By Ramzi Yare	 On May 15, 2018
Ka dib dabicii dhaqaalle ee ku yimid kooxda LLPP Jeenyo, xiddigo badan ayaa kooxdaas ka tegay kuwaas oo ku biiray kooxo kala duwan, qaarkood oo aan weligood qaadin horyaal ayeey u suurta gashay in dhagta ku dhigaan koobka Soomaali Premier League.
Ku Guuleysashada horyaalka dalkaaga waa ahmiyadda koobaad ee ciyaartoyda ay siiyaan marka ay ciyaarayaan horyaallada dalalkooda, haddaba caalamka waxaa jira xiddigo aan weligood horyaal ku guuleysan kuwaas oo nasiib darro kula fadhiistay kubbadda cagta.
Qannaaskii Ingiriiska iyo Liverpool Steven Gerard ayaa ah tusaalle wanaagsan marka aan ka hadleyno xiddigaha koobabka kala duwan ku guuleystay haddana aan weligood qaadin tartanka horyaalka heerka koobaad ee dalkiisa, markii ugu dambeysayna isaga ayaa lugtiisa ku dhiibtay oo Demba Ba ayaa qalqal ka geliyay horyaalkaas.
Kubbadda ayuu ka fadhiistay isaga oo aan weligiis kor u ruxin tartanka horyaalkiisa, ha yeeshee wuxuu sumcad ka sameeyay koobabkii kale ee kooxdiisa ay ciyaartay, sida Champions League iyo tartamada kale.
Jemmy Caragher oo isla Reds ayaa isna ku guuleysan weli horyaal wuuna ka fadhiistay ciyaaraha, isagoo si lamid ah qaaday tartamada waa weyn ee ay kooxdiisa ciyaartay.
Haddaba waxa aan idin soo gudbin doonnaa qaar kamid ah xiddigaha Soomaalida ee aan weligood ku guuleysan horyaal ha yeeshee xilli ciyaareedkan ay u suurta gashay in ay ku guuleystaan horyaalka dalka Soomaaliya.
Liiska wuxuu noqon doonaa sida hoos ku qoran:-
1-Daa’uud Tubaal:- xiddigii hore ee kooxda Jenyo ayeey u suurta gashay qaadidda tartanka horyaalka Soomaaliya ka dib markii uu ku biiray kooxda Dekedda oo sannadkii labaad oo xiriir ah qaadday horyaalkaas, isago lix sano sugaaye in uu mar uun ku guuleysto horyaalka.
2-Feysal Xasan Xaashi:- gool dhaliyihii hore ee isla Jeenyo ka Jeenyo ayaa isna qeyb ka ahaa saf ciyaareedkii Yuu Cali ee kalkan ku guuleystay Soomaali Premier League.
3-Raimound Mbugua (Reymuunda) xiddigga asal Neyjeriyaanka (Nigerian) ka balsa heysta dhalashada dalka Kenya ayaa isna ku guuleystay sannadkan horyaalka waana markiisii ugu horreysay ee sidaas ay dhacdo.
4-Cabdimajiid Cismaan Ibrahim, oo kamid ah xiddigihii kasoo baxay gobolka Banaadir ciyaarihii maamul goboleedka ayaa isna ku jira shakhsiyaadka ay taabaneyso sheekadan.
5-Cabdiweli cabdiraxmaan Max’ed (Aaweli) mid kamid ah dhallinyaradii sannadkan wacdaraha ka dhigay tartankii 17 jirrada Soomaaliya ee Burunddi lagu marti geliyay, ayaa isna sannadkan Dekedda la qaaday horyaalka SPL.
6-Max’ed Nuur Cabdi (Nuuraanni):- Khadkii dhexe ee Heegan ayaa kusoo biiray xilli ciyaareedkii dhammaaday kooxda Dekedda durba waxaa u suurta gashay ku guuleysiga horyaalka.
7-Adapayour Mustapha:- ciyaariyahanka xorta ku yimid horyaalka Sooomaaliya iyo kooxda Dekedda ayaa isna ah qofka ugu dambeya ee sheekadan ay taabaneyso.
Waxaa jira xiddigo kale oo sannadkii ugu horreyay qaadaya horyaalka ha yeeshee kuwan ayaa ah kuwa ugu caansan.
W/Q:Cabdifattaax Cabdirashiid (Naani)
10-ka Xiddig ee ugu TAAJIRSAN kubbada cagta England ee da’doodu ka hooseyso 30-jir
Wax Ka Baro Taariikhda Garsooraha Dhex-dhaxaadin Doona Final-ka Champions League Ee Real v Liverpool